चारदिने नेपाल भ्रमण सकेर आज फर्किदै एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा। - Malayakhabar
होम पेज देश समाचार चारदिने नेपाल भ्रमण सकेर आज फर्किदै एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा।
चारदिने नेपाल भ्रमण सकेर आज फर्किदै एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा।
काठमाडौं:= नेपालको चारदिने भ्रमण सकेर अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली आज (आइतबार) फर्किने भएको छ ।
कतार हुँदै बिहीबार नेपाल आइपुग्नु भएकी एमसिसी उपाध्यक्षसहितको टोलीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेको थियो । अमेरिकी सहयोग परियोजना नेपालमा लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को बहस भइरहेका बेला टोली नेपाल आइपुगेको थियो ।
जनस्तरबाट नै विरोध भइरहेको भए पनि उक्त टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सत्तापक्ष र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गरेको छ । एमसिसी संसद्बाट पास गर्ने सन्दर्भमा दलहरू दुई धारमा बाँडिएपछि उपाध्यक्ष फातिमासहितको टोली रित्तो हात फर्किएको टिप्पणी हुन थालेको छ । यद्यपि, नेताहरूले संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अगाडि बढ्न सकिने भन्दै उक्त टोलीलाई विश्वस्त पारेका छन् ।
गठबन्धनमै मिलेन कुरा
सत्ता गठबन्धनभित्र नै एमसिसीका सन्दर्भमा दलहरू विभाजित रहेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी एमसिसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रिय सहमतिबिना पास गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन् ।
फातिमासँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले दलहरूसँग सहमति जुटाउनका लागि प्रयास गरिरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभएको थियो । तत्कालीन समयमा विपक्षमा हुँदा पनि एमसिसी पास हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको कांग्रेसले अहिले पनि सोही धारणा राखिरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीको बारेमा नबुझेर धेरै राजनीतिकरण गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाउँदै आउनुभएको छ ।
फातिमासँगको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकाल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको थियो । अहिलेको अवस्थामा संसद्बाट पास गर्न समस्या रहेकाले संशोधनसहित अगाडि बढाउन प्रयासरत रहने उहाँहरूको भनाइ थियो ।
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी भने आफ्नो तर्फबाट सम्झौता पास गर्न कुनै समस्या नरहेको र अन्य दलहरूसँग पनि सहमति गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अहिले एमसिसीका बारेमा आफ्नो धारणा फेर्नुभएको छ । सत्तामा हुँदा सभामुखका कारण अगाडि बढाउन नसकिएको उहाँले उपाध्यक्ष फातिमासँग बताउनुभएको थियो । अहिले आफूहरू विपक्षीमा रहेकाले पास गर्न आफ्नो हातमा नभएको पनि उहाँले बताउनुभएको थियो ।
सत्तारूढ दलहरूको आधिकारिक धारणा आएपछि आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने ओलीले बताउँदै आउनुभएको छ । तर, पछिल्लो समय एमालेमा संशोधनबिना सम्झौता अगाडि बढाउन नहुने मत बलियो हुँदै गएको छ ।
शनिबार अर्थमन्त्रीसँग भेट
उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शनिबार भएको भेटमा उहाँहरूबीच आयोजनाको समग्र पक्षका बारेमा छलफल भएको थियो ।
भेटका अवसरमा अर्थमन्त्रीले एमसिसीका विषयमा राजनीतिकस्तरमा छलफल भइरहेको बताउनुभएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न कम्प्याक्टका विषयमा राजनीतिकस्तरमा छलफल भइरहेको छ ।’ सो अवसरमा उपाध्यक्ष सुमारले कम्प्याक्टलाई शीघ्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नुभएको थियो ।
उपाध्यक्ष फतिमाको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल र सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग शुक्रबार भेटवार्ता गरेको थियो । यस्तै, बिहीबार नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरेको थियो ।
छलफलका क्रममा अधिकांश नेताले एमसिसीका सम्बन्धमा देखिएका विवाद सम्बोधन गर्न र केही बुँदा संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । एमसिसी सहयोगबाट ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । ती परियोजनाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँबराबर लगानी हुनेछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।
एमसिसीका सन्दर्भमा पूर्वाग्रही छैनौँ तर लम्पसार पनि पर्दैनौँ : माधव नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसिसी नेपालको हितमा रहेको ग्यारेन्टपछि मात्रै अघि बढाइने बताउनुभएको छ । युवा संघ, नेपाल लुम्बिनी प्रदेशद्वारा शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजित प्रदेश भेला एवं पिपुल्स भोलेन्टियर घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले एमसिसीका सन्दर्भमा आफूहरू पूर्वाग्रही नहुने र लम्पसार पनि नपर्ने बताउनुभयो ।
एमसिसीका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा आफूले नेपाल स्वतन्त्र राज्य भएको भन्दै सुरक्षासँग उक्त परियोजना जोडिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेको बताउनुभयो । ‘झलनाथ खनालले पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई प्रष्ट पारेर, यो परियोजना नेपालको हितमा छ, यो परियोजना नितान्त रूपमा आर्थिक सहयोगको परियोजना हो, सुरक्षासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन, आर्थिक विकाससँग मात्रै जोडिएको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुस्, नेपालले भन्नुभयो । उहाँले एमसिसी परियोजनामा आफूहरूले बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकारलाई स्थापित गर्न चाहेको बताउनुभयो ।
विप्लव समूहको चेतावनी : एमसिसी पारित गर्ने मूर्खता गरे देशभर आन्दोलनको आगो बल्छ
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारलाई अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी पारित नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चन्द नेकपाले सरकारले एमसिसी पारित गर्ने मूर्खता गरे देशमा आगो बाल्ने चेतावनी दिनुभयो ।
नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले सरकारले एमसिसी पास गरे आगामी संसदीय चुनाव खरानी भएर जनमत संग्रह हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले एमसिसीको मुद्दा मुखरित भएर फेरि एकपटक नेपालको राष्ट्रियतामाथि हमला भइरहेको निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो ।
‘एमसिसीको मुद्दा मुखरित भएर अहिले फेरि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि एउटा ठूलो हमला भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तीन÷चार वर्ष अगाडि यसलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकी शासक वर्गले ल्याएको प्रोजेक्ट हो । जनताले अहिलेसम्म त्यसको विरोध गरिरहेका छन्, तर सरकारले विभिन्न प्रपञ्च रचिरहेको छ, यदि पास भए पार्टी र नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन ।’
आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय र केन्द्रीकृत रूपमा नेतृत्व प्रदान गर्न एकहप्ते संघर्षको कार्यक्रम राखेको बताउँदै प्रवक्ता प्रकाण्डले भाद्र २८ गते काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आन्तरिक संकटबाट ग्रस्त भएपछि बनेको र यसको आयु ६ महिना वा एक वर्षको हो भन्ने कुनै ठेगान नरहेको बताउनुभयो । ‘सरकारले एमसिसीलाई पास गर्ने जोड गरिरहेको छ, हामीले राष्ट्रिय र केन्द्रीकृत रूपमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्न पार्टीले एकहप्ते संघर्षको कार्यक्रम राखेको छ ।
२८ गते काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शन हुँदैछ, देउवा सरकार पनि ६ महिना वा एक वर्ष कति टिक्छ टुंगो छैन, त्यसैले अहिले एमसिसी पास गरेर मूर्खता नगर्नुस् ।’ प्रवक्ता प्रकाण्डले सरकारले मूर्खता गरिरहे देशमा आगो लाग्ने चेतावनी दिनुभयो । एमसिसी मूर्खता गरेर पास गरे देश जल्ने र देशमा आन्दोलनको आगो लाग्ने चेतावनी दिनुभयो ।
एमसिसीको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप
अमेरिकन सहयोग मिलिनियम चाइलेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौता सदनबाट अनमोदन गर्न खोजिएको भन्दै पछिल्लो केही दिन निरन्तर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त रहेका बेला एमसिसीविरुद्धको विरोध चर्किँदै गएको हो ।
राजधानी काठमाडौंमा मात्रै होइन देशका कतिपय क्षेत्रमा समेत एमसिसीविरुद्ध विरोध प्रदर्शन हुन थालेको हो । एमसिसी राष्ट्र हितविपरीत रहेको भन्दै विभिन्न संगठन र व्यक्तिले दिनहुँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विभिन्न संस्थाको अगुवाइमा एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नगर्न खबरदारी गर्दै शनिबार पनि काठमाडौंसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन भएका छन् । विभिन्न समूह र व्यक्तिले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शन काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारविरुद्ध नाराबाजी गर्नुका साथै एमसिसी खारेजीको माग गरेका थिए ।
प्रदर्शनकारीले ‘एमसिसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसिसी सम्झौता खारेज गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए । प्रदर्शनका क्रममा नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रदर्शनकारी प्रहरीबीच केहीबेर तनाव भएको थियो । सो क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच पटक–पटक झडप भएको थियो । भिड नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गरेको लाठी चार्जबाट केही प्रदर्शनकारीसमेत घाइते भएका छन् । प्रहरीले प्रदर्शनमा उत्रेका दुई दर्जन बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
यस्तै, शनिबार वीरगञ्जमा पनि एमसिसीविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएको छ । आइटी आर्मी जिल्ला कमिटीको आयोजनामा विरोध प्रदर्शन भएको थियो । मुलुकमा एमसिसी कुनै पनि परिस्थितिमा लागू गर्न नहुने प्रदर्शनकारीको माग रहेको थियो ।
अघिल्लो लेख थारु जातिले अट्वारी पर्व मनाउदैँ, के छ त अट्वारी पर्वकाे महत्त्व?
पछिल्लो लेख अब बिजुलीको बिल खल्तीबाटै भुक्तानी।